Abalingisi asphalt ingxube ukhonkolo impahla eziyinkimbinkimbi-esiyinhlanganisela kabanzi ngezinhloso ukwakhiwa. Umehluko omkhulu kusukela asphalt mastic kuyinto asphalt inqubo ukhonkolo ukufakwa kwalo.
Ukwakheka asphalt yabalingisi iqukethe izingxenye efanayo ngoba asphaltic ukhonkolo, kodwa ngezabelo ezahlukene nomkhombe. Izingxenye ezisemqoka ingxube bakheka amatshe, isihlabathi, amaminerali powder kanye itiyela. Kodwa izithako langempela kukhona Ukwakheka ukuhluka. Sand esetshenziswa odabuka yemvelo noma dropout edwaleni futhi amaminerali powder - Yenziwa kusuka kakhulu amatshe carbonate.
Inani itiyela kanye powder kakhulu kunakunoma ukhonkolo asphaltic, okwenza samuntu ngepulasitiki olubunjiwe viscous. abakhiqizi abaningi emsebenzini wokukhiqiza yabalingisi asphalt imvuthuluka ingxube esetshenziswa, okuyinto nakanjani kunciphisa tindleko inqubo yokudala komzila womgwaqo, kodwa ibe nomphumela ongemuhle impahla yayo.
Inzuzo enkulu lolu hlobo enamathela kuqedile ukumelana namanzi ngenxa lonke kunokuba isakhiwo ukungena nakwamanye amazwe, ngaleyo ndlela kwande ukuqina luqhubeke kwenkululeko isicelo. Isihloko izidingo zobuchwepheshe ukwenziwa empilweni mastic asphalt kuze kube yingxenye ngekhulu, kube ngukukhonza ukuphila isikhathi eside ngokuphawulekayo-asphalt ukhonkolo.
Ukusetshenziswa Izingxube enjalo ivumela ukwenza komzila womgwaqo bushelelezi kangcono kanye nokuncishiswa ukushuba ngaphandle kokulahlekelwa izakhiwo uphawu. Lolu hlobo lwe-asphalt ukhonkolo siye sathuthukisa ezonakalisayo bafake izici futhi eyizingqabavu ukuhlukahluka isikhathi umonakalo ukukhathala, kanye uyakwazi withstanding ezinkulukazi eqine ukusonteka uhlamvu. asphalt mastic kuyinto livikela kakhulu ukulimala zikagesi noma isibungu amathayi igcwele, ongakwazi ukumelana namazinga okubanda kakhulu futhi ezinde ukuchayeka ezishisayo. Akudingi ukusetshenziswa ingxube kubekwa uphawu, futhi luthi alufane ukulungisa kungaba kwenziwe ngesikhathi okushisa aphansi.
Nokho, lokhu enamathela sinezici engalunganga, njalo zihlanganisa okusezingeni eliphezulu yokukhiqiza izindleko ngenxa ukusetshenziswa amanani andayo alabo izingxenye ezibizayo, kanye nesidingo kuqashwe amasu oluphrofeshinali emakhiyubhi futhi esikhundleni i-asphalt (ezikhethekile Thermo-labathaki bamafutha futhi heater). Ngaphezu kwalokho, ngenxa okuqukethwe eliphezulu asphalt izindlu binders ahlupheke izinkomba ngenxa okuyinto kunesidingo umsebenzi owengeziwe phezu compact black amatshe ungqimba ogibele umgandayo asphalt.
mastic asphalt ubuchwepheshe
Le nqubo ayikanye ezintsha. Ukukhiqizwa cast asphalt Kwenziwa kwi asphalt izitshalo ezikhethekile izakhiwo bitumomesilnyh, efanayo omkhulu ukhonkolo labathaki bamafutha, ngokuvumelana ubuchwepheshe, efana womshini ezivamile asphalt ukhonkolo. Ingxube siphelile has lokushisa eliphezulu (200 C), esenganyelwe kuze ukusetshenziswa kwento inhloso yazo. Lapho ethutha asphalt uketshezi kumele njalo ushukumisa ngxube ukugcina ukushisa okuyiwona imishini ekhethekile adaliwe - "Kocher", okuyizinto Thermo-labathaki bamafutha.
Sakaza i-asphalt ukhonkolo esetshenziselwa izwe ngokwakha imigwaqo emikhulu kanye Trace, umgwaqo kanye ibhuloho evele kanye eceleni komgwaqo. Ngaphezu kwalokho, ngenxa izakhiwo viscous, isetshenziswa ukuze ungangenisi amanzi noma ustilaniya emabhilidini amakamelo. Bebaningi abantu asphalt mastic kwakubangelwa ukusetshenziswa okuntofontofo e-ukukhanda izimbobo umgwaqo nenkathi ebandayo at kwamakhaza ashubisa umnkantsha. Ngemva enamathela kalula ukusinda kuze kube degrees 10 futhi igcwalise isikhala okuyinto emgodini.
Futhi faka asphalt mastic ngoba umgandayo ezinengilazi. Lokhu kukuvumela ukuba ugcine zonke izimfanelo ezinhle ithrekhi ngiwunike ifomu yobuhle isakhiwo. Ngalesi umgandayo akusho zihlume utshani, akukho imifantu. I enamathela ongamelana kokubili okusezingeni eliphezulu isisindo umthwalo futhi lokushisa iconsi. Nokho, ukusetshenziswa yabalingisi Izingxube ekukhiqizeni kuvuleke Slabs, azigcina hhayi kuphela zonke izakhiwo ezuzisayo asphalt, kodwa futhi kudala amasha. umgandayo okunjalo okusezingeni eliphezulu ukuzinza ezishisayo kanye nobungane kwemvelo, ngoba Tile Ukushisa lokushisa ngenhla ukuthi akuvumeli enamathela ukwaba kuya carcinogens imvelo.
asphalt wathela zisuswe kalula futhi zezikhali, futhi umane kabusha. Lokhu konga imali zokulungisa. Ukusetshenziswa ukukhiqizwa ephezulu-asphalt mastic ngoba kuvuleke Slabs uqinisekisa eshalofini yokuphila isikhathi eside umgwengwezi, okuyinto, ngokungafani kusukela asphalt kuze kube iminyaka engu-100. Gandelwe yabalingisi Izingxube nguye elilungile ukusetshenziswa ezindaweni siqu, ngoba ezingeni lelisetulu izinga nobungane kwemvelo. Sakaza i-asphalt sibonga anhlobonhlobo izici ezibaluleke kanye ukungabikho kwamaphutha ekahle ukukhiqizwa eceleni komgwaqo Ukusabalala.
Ukukhiqizwa Ukusingathwa yokusansimbi
"Kabachok" izihlalo ezingu-13. "Abadlali, umlando wokudluliswa okwedlulele kwenkathi yeSoviet